By Balaleti	 On Oct 24, 2020
Jurgen Klopp ayaa si qiiro leh uga hadlay sida uu ugu faanayo Marcus Rashford inkastoo uu xiddigaan u ciyaaro kooxda ay Liverpool xafiiltamaan ee Manchester United.
Tababaraha Liverpool ayaa gudbay xeyn daabka xafiiltanka kubada cagta isagoo taageero u muujiyay weeraryahanka oo hogaaminaya la dagaalanka saboolnimada caruurta iyadoo dowlada Ingariiska ay ku guuldareysatay inay caawiso caruurta.
Wuxuuna sheegay in kubada cagta ay mar walba tahay mid dadka isku keenta islamarkaan ay soo bandhigeyso bani’aadanimadeena.
“Waxaan rajeynayaa inay hooyadiis ku hanweyn tahay. Ma garanayo isaga laakiin aniga xitaa waan ku hanweynahay isaga. Wuxuuna u ciyaarayaa United taasoo hadalkeyga ka dhigeysa mid yara adag” ayuu yiri.
“Waxa uu Marcus bilaabay waa wax cajiib ah. Inkastoo xafiiltan uu dhex yaalo kooxaha, hadana waqtiyadaan oo kale ka ciyaaryahano ahaan iyo ka bani’aadam ahaan, mar walba waan mideysanahay”
Rashford ayaa diiday inuu hakiyo olalihiisa uu dowlada Ingariiska ugu qasbayo inay lacag ku bixiso cuntada ay helayaan caruurta saboolka ah inta uu iskuulka xiran yahay, inkastoo 322 xildhibaan oo xisbiga talada haya ee garabka midig ay ka soo horjeesteen inay quudiyaan caruurta gaajeysan.
Klopp ayaa cambaareeyay dowlada ras’isal wasaare Boris Johnson isagoo yiri: “Waa wax aad u fiican hogaaminta Marcus Rashford, waqti dad badan oo awood hogaamineed leh ay soo bandhigi waayeen calaamad hogaamineed.
“Wiilkaan ku soo koray xaalad adag islamarkaana leh tayo cajiib ah, ma uusan iloobin halkii uu ka yimdi waana wax cajiib ah.
“Waa ceeb inuu isagu howshaan qabto laakiin sidoo kalena waa wax cajiib ah. Haatan waa nin lagu daydo oo qiimo weyn leh, kamana mashquulineyso kubadiisa.”
Kumanaan taageerayaal Liverpool ah ayaa sidoo kale taageeray ololaha Rashford ee lagu quudinayo caruurta saboolka ah inta ay iskuulada xiran yihiin iyagoo meel iska dhigay xafiiltanka kubadeed.